Soo dejisan Microsoft Excel 16.0.13029.20182 – Vessoft
AndroidXafiiskaSoftware softwareMicrosoft Excel
Bogga rasmiga ah: Microsoft Excel
Microsoft Excel – software ah badan loo inay la shaqeeyaan barasantigareeyaan ah. Software ayaa u saamaxaaya in ay abuuraan, aragtida iyo xaalkaa ku barasantigareeyaan Excel oo hayn-dhismeedka saxda ah iyo muuqaalka on qalabka kale ee. Microsoft Excel waxaa ku jira tiro balaadhan oo ah qalab si ay u isticmaalaan caanaha, jaantus, qoraalo, formatting shuruud, shaandhaynta iwm Sidoo kale software ka badbaadiyay isbeddel kasta to content ee dokumentiga, iyadoo aan loo eegin qalabka faa’iideysan u saamaxaya in ay shaqada bilaabaan kuwii ugu dambeeyey meesha jarida. Microsoft Excel ayaa interface ah dareen iyo goobta ku haboon ee xubno gacanta isticmaalka raaxo ee software-ka.
Abuur, aragtida iyo edit
Tiro badan oo ah qalab iyo muuqaalada
Waafaqsan yahay qalab kale
Qabsashada Buuxi gacanta ku taabto
Soo dejisan Microsoft Excel
Faallo ku saabsan Microsoft Excel
Microsoft Excel Xirfadaha la xiriira